अष्टलक्ष्मीको तर्क-व्यवस्था परिवर्तन भयो, सोच भएन ! - Naya Patrika
अष्टलक्ष्मीको तर्क-व्यवस्था परिवर्तन भयो, सोच भएन !
अष्टलक्ष्मी शाक्य काठमाडाैँ | पुष ०७, २०७४
एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको तर्क छ देशकाे व्यवस्था परिवर्तन भयो तर सोच भएन । काठमाडौं क्षेत्र नं. ८ को ‘ख’बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित उपाध्यक्ष शाक्य १८ वर्षको उमेरदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय छिन् । विभिन्न आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी उनी झापा आन्दोलनमा पटकपटक जेलमा परेकी थिइन् ।
यातनापूर्ण जेलजीवन बिताएकी शाक्य जस्तोसुकै परिस्थितिमा समेत आफ्नो पार्टीलाई नोक्सान हुन नदिएको बताउँछिन् । सम्पन्न परिवारमा जन्मेर भूमिगत बनेकी शाक्य ग्रामीण भेगका जनताको दुःख नजिकबाट बुझेको दाबी गर्छिन् । भन्छिन्, ‘नबुझेर १८ वर्षकी हुँदादेखि राजनीतिमा होमिएँ ।
२६ वर्षमा घर छाडेँ । सम्पन्न परिवारमा जन्मे पनि गाउँमा विपन्न परिवारसँग बसेर उनीहरूका दुःखलाई नजिकबाट नियालेँ ।’ सदा सरल जीवन बिताउन चाहने शाक्य जनता र देशका लागि केही गरौँ भनेर लागिपरिरहेको बताउँछिन् ।
भूमिगत कालमा नै दुई सन्तानलाई जन्म दिएकी शाक्यसँग महिलाका लागि राजनीति निकै कठिन हुने अनुभव छ । विवाहपछि झनै जिम्मेवारी बढी हुने भएका कारण महिलाले निरन्तरता दिन सजिलो नहुने उनको भनाइ छ । उनी थप्छिन्, ‘विवाहअघिसम्म सामान्य हुन्छ, विवाह भएपछि, बालबच्चा भएपछि जिम्मेवारी दोहोरो–तेहेरो हुन्छ । जसले गर्दा निरन्तरता दिन निकै गाह्रो हुन्छ । मलाई पनि अप्ठ्यारो परेको थियो ।’
कुनै पनि क्षेत्रमा महिलाका लागि काम गर्न संघर्षपूर्ण हुने उनको बुझाइ छ । सफल हुनका लागि धैर्य र दृढसंकल्प हुनुपर्ने बताउँछिन् । राजनीतिमा सँगै लागेका उनका कतिपय साथी अहिले राजनीतिमा छैनन् । तर, आफू भने निरन्तर योद्धा भएर अहिलेसम्म हिँडिरहेको बताउँछिन् ।
जनतामाथि भएको अन्याय सहनुहुँदैन भनेर घर छोडेर हिँडेकी शाक्य आफूले पनि घरमा छोराछोरीबीचको असमानता सहेको सम्झिन् । भन्छिन्, ‘घरमा छोरा र छोरीबीच हुने असमानता मैले भोगेकी छु । जसले मलाई विद्रोही बनायो । यस्तो विभेद सहनुहुन्न भनेर घर छाडेँ । घर छाडेपछि समाजमा हुने वर्गीय तथा जातीय विभेद देखेँ, बुझँे, त्यसले पनि समानता र परिवर्तनका लागि म हिँडिरहनुपर्छ भन्ने अडान मनमा आयो ।’
पार्टीभित्र हुने विभेदको जहिल्यै विरोध गर्दै आएकी छिन् उनले । सबैले समान अवसर पाउनुपर्छ भन्ने उनको माग पार्टीभित्र रहँदै आएको छ । पार्टीले दिएको मन्त्री पद नयाँ व्यक्तिले पाउनुपर्छ भनेर उनले त्याग गरेकी दाबी गरिन् ।
उनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा महिलाको सहभागिता सम्मानजनक हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएकी छिन् । पार्टीको संरचनामा पुरुष नेतृत्व बढी रहेकाले थोरै मात्र महिलाले टिकट पाएको बताउँछिन् । त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरूप अब समानुपातिकबाट एकतिहाइ महिला पु¥याइनुपर्ने बाध्यता पार्टीलाई रहेको र आगामी दिनमा यस्तो गल्ती हुन नहुने उनको भनाइ छ । भन्छिन्, ‘महिलाले टिकट नपाउनुले नै पुष्टि गर्छ कि हामीकहाँ व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सोच परिवर्तन भइसकेको छैन ।’
अबको केही वर्षसम्म राजनीतिमा सक्रिय रहने र बाँकी समय सामाजिक गतिविधिलाई दिने योजना उनको छ । ‘मैले निभाएको जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वले सम्हाल्नुपर्छ । यसरी नै नयाँ नेतृत्वको जन्म हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
आफूलाई कडा स्वभावकी बताउने शाक्य कहिलेकाहीँ आफ्नो बानीले गर्दा बेफाइदा पनि पुगेको बताउँछिन् । उनको कडा बोल्ने स्वभावकै कारण सहकर्मीहरू खुलेर कुरा गर्न नसक्ने उनको अनुभव छ । प्रदेश सभाको सदस्यमा उम्मेदवारी दिएसँगै ‘जसरी पनि जित्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनको चर्चा थप चुलिएको थियो ।
अन्ततः उनले भनेजस्तै जितेर देखाइन् । एक हजार पाँच सय मतान्तरले कांग्रेसका देवरत्न डंगोललाई पराजित गरेकी हुन् । विजयसँगै क्षेत्र नं. ३ को मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा उनको चर्चा चलिरहेको छ । अहिले प्रदेश नम्बर ३ को संयोजकसमेत रहेकी शाक्य मुख्यमन्त्री हुने सम्भावनाको विषयमा चासो राख्दा पार्टीको निर्णय तथा वाम गठबन्धन रहेकाले संयुक्त पार्टीको निर्णय नआइन्जेल केही भन्न नसक्ने बताउँछिन् ।